Mayelana NATHI - OYE SHOWCASE CORPORATION LIMITED
I-OYE SHOWCASE CORPORATION LIMITED
Ukunakwa Kwemininingwane Nokuqina Okuqinile
Imikhiqizo yekesi yokubonisa eyenzelwe iqembu labaqambi abaphambili nenoveli ngesitayela, imishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme yenza amandla wokukhiqiza abe namandla kakhulu, futhi uhlelo oluqinile lokuphathwa kokukhiqiza luqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo.
Ukulethwa okusheshayo kufushanisa kakhulu umjikelezo wokuvula wezitolo, futhi izinzuzo zezinto ezibonakalayo zenza amanani ethu alunge futhi abe namandla wokukhulisa izivumelwano zamakhasimende.
Siqoqe iqembu lamaqembu okukhiqiza anolwazi futhi anekhono.Sihlala sinamathela kumoya wokuphayona nowokungenzi lutho, futhi silwele ukwenza kahle kakhulu ekukhiqizeni.
I-OYE SHOWCAES CORPORATION LIMITED yenzelwe ukukhiqiza izinto ezitolo, ukweba ezitolo, izibonisi nezinto ezikhethekile zabathengisi bamazwe aphesheya, abathengisi bezitolo, abangenisa ngaphakathi.Sibambisene namakhasimende angaphezu kwe-110 avela eYurophu, e-USA, e-Australia naseNingizimu Melika.
Futhi sisebenze nemikhiqizo edumile emhlabeni wonke, efana ne-Triumph, MauiJim, Bulova, Tiffany, Charlotte Tibury, Citizen, Raymond Weil ect Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-13 yentuthuko, sinolwazi olunothile kwezentengiso nasemva kwensizakalo yokuthengisa. dala isitolo esikhethekile futhi sikunikeze ukubonisa okukodwa. Vele ulethe imicabango yakho noma umdwebo, ake senze okunye. Sizobe sengamela yonke into kusuka ekwakhiweni, ekukhiqizeni, ekuvivinyweni nasekuthunyelweni.
Faka i-oda namuhla, bese sizokuthumela kuwe ezinsukwini ezingama-30.
Uhlobo lwebhizinisi Umkhiqizi
Izwe / Isifunda IGuangdong, China
Usayizi wefektri Amamitha-skwele ayi-5,000-10,000
Imikhiqizo Main imibukiso, izakhiwo zasesitolo, izitendi zokubonisa, izinto zokubala izingilazi
Ukukhiqiza Inkontileka Isevisi ye-OEM Inikelwe
Ingqikithi Yabasebenzi Abantu abangu-51 - 100
Imigqa Yokukhiqiza 5
Imali engenayo ephelele US $ 2.5 Million - US $ 5 Million
Unyaka Usungulwe 2017
Izimakethe Eziyinhloko ENyakatho Yurophu 18.00%
I-Nyakatfo Melika 15.00%
Ukubukwa kwethu kwengilazi kuhle kakhulu ukukhombisa amapayipi okubhema ne-vaporizer. Amakhasimende ahlanganisa izinto zokubala ngazinye bese ebeka imikhiqizo yawo emihle emashalofini futhi amakhasimende athi kakhulu "kubukeka kukuhle kakhulu"